''Liivarpuul Cheelsii 2-1 ni injifata'': tilmaama Laawuroo, walii galtuu? - BBC News Afaan Oromoo
Weest Haam fi Leestar (2:00 galgala)
Weest Haam torbee darbe erga Waatfoordiin injifatamee booda yeroo jalqabaaf kilabicha leenjisuu kan eegalan Deeviid Mooyees haasofsiiseen ture. Isaanis akka gaariitti hin taphanne ture jechuun amananii jiru.
Taphattoonni kilabichaa ofitti amantummaa akka hin qabne natti mullata. Leestar waliin walqixallee ba'uun waan gaarii dha, kanaan alas dirree ofiirratti yeroo jalqabaaf moo'amuun Mooyeesiif dansaa miti.
Tilaammii Laawuroo: 1-1
Kiriistaal Paalaas fi Istook Siitii
Ammas haa ta'u turee, jijjiiramni Rooy Haadisaniin Paalaas keessatti mullachaa jiru gara injifannootti geeddaramuun hin oolu, garuu Istook waliin sun ta'uunsaa natti hin mullatu.
Gareen Maark Hiiwujis cimina amma qabaniin itti fufu jedheen yaada.
Tilaammii Laawuroo: 1-2
Maanchistar Yunaayitid fi Biraayitan
Biraayitan cimina amma qabaniin Piriimeer Liigii keessa waan turan fakkaata. Kanaaf ammoo Wiixata darbe Istook waliin qixa ba'uun isaanii ragaa dha.
Poogbaan deebi'uu isaatiin kaka'umsa kan argatan Yunaayitid, amma galchii lakkoofsisuuf waan itti salphate fakkaatu, Biraayitanis kan ni dandamatu jedhee hin yaadu.
Niiwukaasil fi Waatfoord
Waatfoord Weest Haamiin yoo injifatan arguu koon hedduu na dinqe. Kubbaa sirriitti fayyadamu.
Niiwukaasil Yunaayitidiin dursuun isaanii tarii dogoggora ture. Galchii tokkoon dursuu eegalanii Jaakoob Marfii kubbaa fashaleessuun isaa dhumarratti akka injifataman isaan taasise.
Raafaa'eel Beeniteez yeroo 4'f walitti aansuun moo'amuu waan barbaadan natti hin fakkaatu, kanaaf taphichi cimaa waan ta'uuf qabxii qooddatu jedheen yaada.
Siwaansii fi Boornimaz
Siwaansiin paawundii miiliyona 45 Eevartanirraa gurgurtaa Siigurdisaniif argatan hojiirra oolchuu hin dandeenye, akkasumas Fernaandoo Looreentee bakka buusuusn itti ulfaateera, kanaaf ammoo sadarkaa dhumaarra taa'uuf dirqamanii jiru.
Taphattoonni Siwaansii ofitti amantummaan isaanii waan gadi bu'e fakkaata, faalaa kanaan ammoo Boornimaz taphoota jalqabaa 8 irraa qabxii 4 qofa kan argatan ta'us, taphoota 4 darberraa 3 injifachuu danda'anii jiru.
Tootanhaam fi Weest Biroom
Toonii Puuliis ari'amuu isaanii bakka kan bu'e Gaarii Meegisan ammas hojiirra jira taanaan, omaa waan jijjiiru natti hin fakkaatu.
Tootanhaam ammoo erga darbii Landaniin haala hin taaneen moo'amanii booda, Booruushiyaa Doortimandiin injifachuun hamilee gaariirra jiru, kanas haala gaariin ni moo'u jedheen yaada.
Liverpool v Chelsea (02:30 guyyaa )
Gareen Yergan Kiloopp Arsenaaliin Fulbaana darbe erga injifatanii booda kilaboota sadarkaaf morkatan keessaa moo'uu hin dandeenye. Siitii fi Tootanhaam waliin ammoo haala hin taaneen moo'amani.
Eedan Haazaard tibbana ciman bareedaa agarsiisaa jira, Cheelsiinis walitti aansuun taphoota PL 4 injifatanii jiru.
Amma Liivarpuul carraa dirree ofiitti fayyadamuu danda'u.
Saawuzhaapitan fi Eevartan
Eevartan taphoota 6 keessaa qabxii guutuu 3 argachuu kan danda'an tokko qofaarratti, haala taphaa Deeviid Anziwoorz ittiin dhiyaatan jaalachaa jiraadhus, Saawuzhaampitan irratti ni milkaa'u jedhee garuu hin yaadu.
Dapaah's prediction: 1-3
Barnileey fi Arsenaal (08:00 guyyaa)
Ciminni Barnileey torbee darbes Siwaansii irratti itti fufee ture.
Oziil torbee darbe Arsenaaliif sochii gaarii taasiseera, garuu rakkoon isaa cimina dhabuu miti, walitti fufiinsa dhabuu dha malee.
Cimina isaa taphoota 5 keessaa 1 irratti osoo hin taane, 10 keessaa 7 irratti mullisuu qaba, ammaf kan jiru ammoo isa jalqabaa fakkata.
Haadarsifiild fi Maanchistar Siitii (10:00 guyyaa)
Chaampiyoons Liigii irratti Fiyeenoord waliin tapha gaarii agarsiisuu dhabuun isaanii PL irratti ni dabalama jechuu miti. Gareen Peepp Guwaardiyoolaa taphoota 17 walitti aansuun moo'ateera, taphoota hundarratti gaarii taphatanii hin turre kan moo'an.
Gaarii taphachuu baatanus maal gochuu akka danda'an agarsiisanii jiru.
Haadarsifiild Yunaayitidiin ji'a darbe yoo moo'an, dirree isaaniirratti kilaboota ciccimoo irratti boqonnaa dura haala gaariin yoo eegalan maal gochuu akka danda'an agarsiisaniiru.
Yunaayitid hanga boqonnaa boodaatti omaa gochuu hin dandeenya, Siitiinis dogoggora sana ni dabalu jedhee hin yaadu.